IiMaphu zeApple zongeza iiNkcukacha ngeeNdawo zokuQeshisa iiBhayisikile kunye neeNqaku zokuBiza imoto eYurophu | Ndisuka mac
I-Apple Maps yongeza ulwazi malunga nokuqasha ibhayisikile kunye neendawo zokutshaja izithuthi eYurophu
Kubonakala ngathi iimephu zika-Apple zithathe isitulo esingasemva kwinkampani, njengoko uhlaziyo oluncinci okanye olungafumanekiyo kwiinyanga ezidlulileyo. Ukongeza, namhlanje kusekho amazwe amaninzi apho ulwazi ngezithuthi zikawonke-wonke lungekabikho. Olu khetho lusivumela ukuba sihambe ngezixeko sisebenzisa kuphela izithuthi zikawonkewonke. Ngelixa ezinye izicelo ezinje APHA Siya, iimephu ezindala zeNokia, zibonelela ngolu hlobo lolwazi phantse kuyo yonke indawo emhlabeni, njengeGoogle Maps, I-Apple isaluthathela ingqalelo olu lwazi njengolwesibini kumazwe amaninzi, kwaye bajolise ekunikezeleni ngeenkonzo zolwazi olutsha kumazwe apho olo lwazi lwalusele lufumaneka.
U-Apple usandula ukufaka umsebenzi omtsha kwi-Apple Maps, umsebenzi omtsha osivumela ukuba sikhawuleze sifumane ulwazi malunga neendawo zokutshaja zezithuthi zombane kunye nokuqasha iibhayisikile eLondon naseParis, nangona ingezizo zonke iindawo ezikhoyo ezikhoyo, kodwa esinokuzifumana kuphela ezo zenkampani yaseJamani iCirrantic. Ulwazi malunga neendawo zokurenta ngebhayisikili zikwakhona kwiSixeko saseNew York kuphela.
Okwangoku kubonakala ngathi iimephu zika-Apple ziya kuqhubeka ukugxila ekongezeni iinkonzo kumazwe apho isabelo sentengiso siphezulu, kuba kungenjalo andinakuyiqonda kakuhle indlela ekunokwenzeka ngayo ukuba phantse iminyaka emibini emva kokubhengezwa kwayo eWWDC, lUlwazi malunga nezithuthi zikawonke-wonke alufumaneki nakweyiphi na idolophu yaseSpain, umzekelomasiyichukumise ngokusondeleyo. Ukusukela oko kwahamba iimephu zikaGoogle kwinkqubo yendalo ye-iOS, iApple izamile ukuphucula inkonzo yayo yemephu ukuze ime kuGoogle usomandla, kodwa kubonakala ngathi yayilinyathelo elihle ekuqaleni, liye ngasemva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Maps yongeza ulwazi malunga nokuqasha ibhayisikile kunye neendawo zokutshaja izithuthi eYurophu